မြောင်းမြတံတား ကျိုးကျရာတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ဖုန်းကြိုး ပါဝင်သွားသည့်အတွက်ြ - Yangon Media Group
မြောင်းမြ၊ ဧပြီ ၉
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး မြောင်းမြကြိုးတံတားကျိုး ကျမှုဖြစ်စဉ်နှင့်အတူ ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး Cable ကြိုးများပါဝင် သွားသည့်အတွက် မြောင်းမြမြို့ နယ်အတွင်း အမ်ပီတီဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများ ယာယီပြတ်တောက် မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ဖိုက် ဘာကေဘယ်ကြိုးတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
တံတားကျိုးကျမှုကြောင့် ကေဘယ်ကြိုးများပျက်စီးခဲ့သော်လည်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအ နေဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းများ လိုင်းပြတ်တောက်မှုမရှိစေရန်အတွက် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဆောင် ရွက်ပေးခဲ့သည်။ “ကျွန်မတို့ မြန်မာ့ဆက်သွယ် ရေးလုပ်ငန်းက ဒီမြောင်းမြကြိုးတံ တားအပေါ်မှာ96 Fiver core နှစ်ချောင်း၊ 48 Fiver core နှစ် ချောင်းပါသွားခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ဖြစ် ချင်းပဲ ဒီ Cable ကြိုးတွေကို ရှင်း လင်းဆောင်ရွက်မှုမပြုနိုင်တဲ့အတွက် ဆက်သွယ်မှုမပြတ်တောက် စေရန် မိုက္ကရိုဝေ့ဖ်တာဝါတိုင် ပေါ်မှာ Backup တင်ပြီး ဆောင် ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်””ဟု ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး တိုင်းဒေသကြီး ဆက်သွယ် ရေးမန်နေဂျာဒေါ်ဆွေမာက ပြောကြားသည်။
ဆက်သွယ်မှုလုပ်ငန်းအမြန်ဆုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်ရေးအတွက် ဧပြီ ၈ ရက်က လက်ရှိ ဇက်ဆိပ်နေရာ ကွယ်လွယ်ကျေး ရွာဘက်ခြမ်းနှင့် မြောင်းမြဘက် ကမ်းသို့ Fiver Cable ကြိုးတပ် ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ခရိုင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်း များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ “ပြတ်သွားတဲ့ Fiver ကို အ မြန်ဆုံးပြုပြင်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းရှာ ကြည့်တဲ့အခါမှာ EPC က အသုံး ပြုထားဖူးတဲ့ မြစ်ကူးတိုင်ကိုအသုံး ပြုပြီး ကျွန်မတို့ Fiver ကို ပြန်ဆွဲ မှာဖြစ်ပါတယ်။ မူလတိုင်ကအသုံး ပြုထားပြီးဖြစ်လို့ ပိုမိုတောင့်တင်း အောင် ဘေးကကပ်ပိုးတိုင်တစ်ခု အဖြစ် ထပ်မံစိုက်ထူပြီး မြစ်ကူး Fiver Cable ကို တပ်ဆင်သွား မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု တိုင်းဒေသကြီး ဆက်သွယ်ရေးမန်နေဂျာက ထပ် မံပြောကြားသည်။ ကေဘယ်ကြိုးလုပ်ငန်းဆောင် ရွက်ပြီးပါက Fiver Transmission ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဖုန်းလိုင်း များ ယခင်အတိုင်းကောင်းမွန်စွာ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မန္တလေးမြို့တော် မဟာသင်္ကြန် သံချပ်ပြိုင်ပွဲသို့ သံချပ်အဖွဲ့ လေးဖွဲ့ စာရင်းပေးသွင်းထားပြီး ?
အနံ့ဆိုးများ ထွက်သော မြန်မာ-ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ကြက်ခြံကို ဖျက်သိမ်းပေးရေး ကြေးနီစီမံကိန်း အနီ??
မြေနှင့်အဆောက်အအုံငှားရမ်းခနည်းသဖြင့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ ကျပ်ဘီလီယံ ၆၀ ခန့် ဆုံးရှုံးနေမှုကိုကျော်?